Taxanaha DDW ee ugu fiican Soo -saaraha iyo Warshadda | Lang Tai
1. Sharaxaada qaabka hawo -mareenka:
2.Hawo-mareenka waxaa kaxeeya mootada korantada rotor-ka ee si toos ah loogu qiimeeyo korantada matoor koronto saddex-waji 380V, hal-waji 220V, r soo noqnoqoshada 50Hz, dabeecadda nidaamka shaqeynta adeegga joogtada ah S1, darajada ilaalinta korontada ee darajada IP44, darajada dahaarka B, habka hoos-u-dhigiddu waa IC0041 qaboojinta dabiiciga ah. Heerkulka hawsha shaqada oo aan ka badnayn 40 ℃. Joogga ka sarreeya heerka badda ma dhaafi doono 1 Qoyaanka qaraabadu wuu ka yar yahay 90%, nooca-jiifsan ee installatio waxaad u baahan tahay codsi gaar ah, fadlan sheeg.)
3. Hawo -mareenku waa inuu ka shaqeeyaa deegaanka gaaska, kaas oo hawadu aysan ku jirin gaas caustic badan; kuma jiro gaaska aashitada ah, gaaska ka -fiirsashada, iyo gaas ololaya; Maaddada walxaha boodhka ma weyna marka loo eego 150mg/m3. Ku rakibidda hawo -qaatehu wuxuu noqon karaa mid caadi ah iyo laba nooc oo kale ah, foomka sida caadiga ah loo adeegsado sida shaxda ayaa muujinaysa ：
4.Sheeggu wuxuu ka samaysan yahay taargooyin bir ah oo tayo leh, ka dibna coa buufiyo electrostaticAlso waxa laga samayn karaa taargooyin bir ah oo tayo leh. Qaybaha firaaqada ah waa la dhimay. Kulanka ugu dambeeya waxaa lagu sameeyaa xariiqda kulanka. Faa'iidooyinka ugu waaweyn waxaa la soo saaraa farsamooyin horumarsan, sida duubista riixitaanka, qolofka hoose, TOriveting iyo iwm.
5. Hawo -mareenku waa qaab -dhismeed keli ah (waxaa jira hal marin kaliya). Waxay la socotaa flange ku-xirnaanta ujeedka gaarka ah, waxay ku xiri kartaa hawada si toos ah si loo badbaadiyo booska rakibidda.
6.Qalabku wuxuu waafaqsan yahay farsamada mechatronics. Waa qaab-dhismeed macquul ah, mug yar, buuq yar, hufnaan sare, nolol adeeg dheer, buruse, xawaare badan iyo wixii la mid ah astaamaha wanaagsan. Sidoo kale, awood -yarida korontada yar waxay ka gudubtaa xaqiijinta CCC. Waxaa loo isticmaalaa si ammaan ah oo la isku halleyn karo
7.Heerka caadiga ah ee tayada sare leh ayaa loo adeegsadaa sheyga, wuxuu kor u qaadaa waqtiga burburka.
8. Hawo-mareenku wuxuu la taagan yahay saldhigyada dhinac walba leh, qaabab kale oo gaar ah oo loo rakibo; ama aan lahayn istaag. Sidaa darteed, si habboon u hagaaji. Waxay ku habboon tahay dalabaadka kala duwan ee plac plating
9.Fadlan sii tilmaan cad oo tusaalaha ah, qaabka rakibidda, adeegsiga taargooyinka birta ah ee aan la daboolin iyo haddii kale, iyo la joogitaanka daloolka daloolka ama ma aha; amarkaaga.
10. Sida laga soo xigtay codsiyada macaamiisha, shirkadeenu waxay naqshadayn kartaa oo samayn kartaa qaab kale oo hawo -haweed foomka rakibaadda kale iyo adeegsiga gaarka ah
Xusuusin: xuduudaha waxqabadka taageereyaasha iyo cabirka qaab dhismeedka taageereyaasha, shirkaddu waxay xaq u leedahay inay wax ka beddesho, markaa ogeysiis la'aan.
o DDWXX-XX№1.3 Taxanaha Ventilator Centrifugal Centrifugal
o DDWXX-XX№1.5 Taxanaha Ventilator Centrifugal Centrifugal
o DDWXX-XX№1.6 Taxanaha Ventilator Centrifugal Centrifugal
o DDWXX-XX№1.8 Taxanaha Ventilator Centrifugal
o DDWXX-XX№2.0 Taxanaha Ventilator Centrifugal Centrifugal
o DDWXX-XX№2.5 Taxanaha Ventilator Centrifugal Centrifugal
o DDWXX-XX№2.25Sententugalugal Ventilator
o DDWXX-XX№3.0 Taxanaha Ventilator Centrifugal
o DDWXX-XX№3.55 Taxanaha Ventilator Centrifugal Centrifugal
o DDWXX-XX№4.0 Taxanaha Ventilator Centrifugal
Hore: BDW taxane hawo-mareenka centrifugal qarxa oo aan caddayn
Xiga: DW taxane hawo -mareenka centrifugal